Sonic Dash 4.3.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.3.1 လြန္ခဲ့ေသာ2ရက္က
ဂိမ္းမ်ား အေႂကြေစ့ထည့္ ကစားရေသာ ဂိမ္းခံု Sonic Dash
Sonic Dash ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သငျသညျ, မထိမခိုက်ခုန်ခြင်းနှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် 3D ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြတ်ပြီးသင့်ရဲ့လမ်းလည်အဖြစ် Sonic အဖြစ် Hedgehog Play ။ ဒီအစာရှောင်ခြင်းနှင့်ပျော်ပါးအဆုံးမဲ့ပြေးဂိမ်းအတွက်စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲတွေကိုကျော်နှင့်အောက်မှာသင့်ရဲ့လမ်းပွတ်ဆွဲပါ။
အဆိုပါကမ္ဘာကျော် Sonic သူ့ရဲ့ပထမဆုံးအဆုံးမဲ့ပြေးဂိမ်းထဲမှာ Hedgehog ကြယ်များ - ဘယ်လိုဝေးသင်သွားနိုင်သလဲ
သငျသညျရူးမြန်နှုန်းမှာ run နှင့်သင့်လမ်းကြောင်းကိုအတွက်အရာအားလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့ခွင့်ပြု Sonic ရဲ့မယုံနိုင်စရာ dash ပြောင်းရွှေ့တိုက်ဖျက်မည်!
ကွင်းဆက်က de ကွင်းပတ်ပတ်လည်အတားအဆီးများနှင့်မြန်နှုန်းကျော်ခုန်, Dodge အန္တရာယ်မှ Sonic ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးချရန်။ Plus အား Sonic ရဲ့ကြီးကျယ်သော Homing စနစ်တိုက်ခိုက်မှု အသုံးပြု. ရန်သူများကိုနှိမ်နင်း!
Sonic ရဲ့လှပအသေးစိတ်ကမ္ဘာတွင်မိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်ဘဝမှကြွလာ - တစ်ဦးအဆုံးမဲ့ပြေးသမားဒါကောင်းသောမြော်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဘယ်တော့မှ!
Tails, အရိပ်နှင့်လက်အပါအဝင် Sonic ရဲ့မိတ်ဆွေတဦးတည်းအဖြစ်ကစားရန်ရွေးချယ်ပါ။
Sonic ရဲ့အကြီးမားဆုံးပြိုင်ဘက်နှစ်ယောက်ကတော့အမြဲတွေးနဲ့ကောက်ကျစ်ဒေါက်တာ Eggman နှင့် Sonic ပျောက်ဆုံးသွားသောကမ္ဘာ့ထံမှ devastatingly သေစေနိုင်သော Zazz ဆန့်ကျင်ပယ်ရင်ဆိုင်ရ! ဒါဟာသိပ်နောက်ကျမယ့်ရှေ့တော်၌ထိုအလူကြမ်းအဖြစ်ချယူ Sonic ရဲ့သွက်လက်နှင့်မြန်နှုန်းအပေါငျးတို့သကိုသုံးပါ!
သငျသညျနောက်ထပ် run ကိုကူညီအကြံပိုင်ပါဝါ-ups သော့ဖွင့်, အနိုင်ရသို့မဟုတ်ဝယ်ဖို့။ ဦးခေါင်းစတင်, ဒိုင်း, လက်စွပ်သံလိုက်နှင့်ထူးခြားသောရမှတ် Boosters အပါအဝင်!
အပြေး ON လိုပါတယ်
ပိုငျသညျ play ထက်ပိုဆုလာဘ်ရယူပါ! ထူးခြားတဲ့မစ်ရှင်ပြီးပါကအားဖြင့်သင့်ရမှတ်မြှောက်ကိန်းအဆင့်တက်, ဒါမှမဟုတ်နေ့စဉ်စိန်ခေါ်မှုများပြီးပါကနှင့်နေ့စဉ်လည်ကစားအားဖြင့်အနီရောင်စတားလက်စွပ် & နောက်ထပ်ဇာတ်ကောင်အပါအဝင်အံ့သြဖွယ်ဆုအနိုင်ရ။
ခေါင်းဆောင်ပျဉ်ပြားပေါ်တွင်သင်၏မိတ်ဆွေများကိုစိန်ခေါ်မယ့်ဒါမှမဟုတ်အကောင်းဆုံးမြန်နှုန်းပြေးသမားသူသည်သက်သေပြဖို့ Facebook မှတဆင့်သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဖိတ်ခေါ် ...
အသက် 13 နှစ်အောက်ဖြစ်လူသိများအသုံးပြုသူများအတွက်ထက်အခြား, ဒီဂိမ်း ( "အကျိုးစီးပွားအခြေပြုကြော်ငြာ" ပါဝင်နိုင်ပါသည် (နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့အ http://www.sega.com/mprivacy#3IBADiscolure ကြည့်ရှုပါ) နှင့် "Precise တည်နေရာဒေတာများကို" စုဆောင်းစေခြင်းငှါ ) ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့အ http://www.sega.com/mprivacy#5LocationDataDisclosure ကြည့်ရှုပါ။
© SEGA ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ SEGA, အ SEGA လိုဂို, Sonic THE Hedgehog နှင့် Sonic Dash SEGA Holdings က Co. , Ltd သို့မဟုတ်ယင်း၏ affiliates ၏မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။
Sonic Dash အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Sonic Dash အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Sonic Dash အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Sonic Dash အား အခ်က္ျပပါ
apk-4-free စတိုး 333.58k 94.14M
Sonic Dash ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Sonic Dash အခ်က္အလက္
File Size: 131.16MB
Release date: 2019-07-18 23:13:40
လက်မှတ် SHA1: 6B:BE:68:C4:1C:FA:96:66:4B:DC:8E:3C:D3:9D:0C:67:96:AE:6E:FA
အဖွဲ့အစည်း (O): Hardlight
Sonic Dash APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ